Ny vatana sy ny fanahy
«Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin’ ny zavatra rehetra anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.» 3 Jao. 1 : 2
Ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny zanany dia ny hitomboany ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'i Krisy. Mba hanatrarana izany dia tsy maintsy ampiasaintsika araka ny tokony ho izy ny hery rehetra ananan'ny saina sy ny fanahy sy ny vatana. Tsy azo atao ny mandanilany foana ny herin'ny saina sy ny vatana.
Ny momba ny fitandroana ny fahasalamana dia anisan'ny zavatra manan-danja indrindra. Rehefa dinihintsika amim-pahatahorana an'Andriamanitra io lohahevitra io dia ho fantatsika fa tsara indrindra ho an'ny vatantsika sy ny fanahintsika ny manana fomba fisakafo tsotra. Aoka hodinihintsika amimpaharetana io lohahevitra io (...)
Ireo izay nandray toromarika momba ny maharatsy ny fihinanana hena, dite (vazaha) sy kafe, sy ny sakafo matavy sy fomba fikarakarana tsy mahasalama, ka manapakevitra ny hanao fifanekena amin' Andriamanitra amin'ny fahafoizany izany, dia tsy hitohy hanaram-po amin'ny filan-kanina izay fantany fa tsy mahasalama. Takin'Andriamanitra ny hampahadio ny filàna sy ny hampiharana fandavan-tena manoloana ny zavatra tsy mahasoa. Izany dia asa tsy maintsy atao mba hahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra hijoro ho vahoaka tsy manan-tsiny eo anatrehany (...)
Andriamanitra dia mitaky amin'ny vahoakany mba handroso tsy miato. Ilaintsika ny mianatra fa ny fana¬ranam-po amin'ny filana no sakana lehibe indrindra amin' ny fitomboana ara-tsaina sy ny fanamasinana ny fanahy. Na eo aza ireo fampianarana rehetra ataontsika momba ny fanavaozana ara-pahasalamana dia maro amintsika no manana fomba fisakafo tsy araka ny tokony ho izy. Ny fanaranam-po amin'ny filana no antony lehibe indrindra mahatonga fikorontanan-tsaina ary fototry ny fahalemena sy ny fahafatesana aloha. Aoka hotsaroan'ny olona izay mikatsaka ny fahadiovan'ny fanahy fa ao amin'i Kristy no misy hery hifehezana ny filana.
Ny fahasalaman'ny vatana dia tokony hoheverina ho zavatra tsy azo ihodivirana eo amin'ny fitomboana amin'ny fahasoavana sy ny fahazoana fitondran-tena voalanjalanja (...) Ny fahadisoana eo amin' ny fihinanana sy fisotroana dia mitarika fahadisoana eo amin'ny fisainana sy ny fanao. Sedraina sy tsaraina ny tsirairay ankehitriny. Natao batisa ho an'i Kristy isika, ary raha manao ny anjara ara manandrify antsika isika amin'ny alalan'ny fialantsika amin'izay zavatra rehetra misarika antsika hihemotra (...) dia homena hery isika hitomboantsika ao amin'i Kristy, ilay mpitarika antsika, ary ho hitantsika ny famonjen'Andriamanitra.